Ukukhiqizwa kwesizini yesi-2 'Creepshow' sekuqalile ngokusemthethweni!
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukukhiqizwa kwesizini yesi-2 'Creepshow' sekuqalile ngokusemthethweni!
by Waylon Jordan September 10, 2020 823 ukubukwa
Ukukhiqizwa ekugcineni sekuqalile ngesizini yesibili ka- I-Creepshow, Uchungechunge lwe-Shudder's anthology olususelwa kwifilimu yango-1980. Ukukhiqizwa kwahlehliswa ekuqaleni konyaka lapho izwe lonke lalivalelwe ukukhathazeka ngeCovid-19.
Isizini yeziqephu eziyisithupha kulindeleke ukuba iqale ukukhonjiswa ngo-2021.
“Angikaze ngijabule kakhulu ukushiya ikhamera njengamanje,” kusho umbonisi UGreg Nicotero kusho isitatimende. “Ngemuva kokuphuthelwa usuku lwethu lokudubula ngoMashi ngamahora angaphezudlwana nje kwama-48, isizini 2 ka I-Creepshow ushaya phansi egijima njengoba amakhamera aqala ukugingqika. Abalingisi nabasebenzi banezinga lesasasa nomdlandla engingakaze ngiwubone ngaphambili futhi kuyakhuthaza. Abaningi bethu embonini yezikaqedisizungu bebelokhu belindele usuku lapho sizoqala khona ukwenza konke esikwenza kangcono kakhulu — ukuzijabulisa ndawonye ngokudala imihlaba emisha, ama-adventures amasha nokuzijabulisa okusha. ”
"Isizini yokuqala kube yinto ebabazekayo kithina, senza amarekhodi ababukeli kulo lonke leli bhizinisi ngenkathi iba uchungechunge olusha kakhulu olushaqisayo lwama-2019," kusho iMenenja Jikelele kaShudder, uCraig Engler. "Ngesizini yesi-2, uGreg Nicotero nethimba lakhe bazenzele ngaphandle ngezindaba ezinkulu nezinesibindi, imiklamo emisha yezidalwa ezinhle, kanye nokusonta okuhlakaniphile okuphila ngokuvumelana nomugqa womdlalo othi, 'Okumnandi Kakhulu Uzokwesatshiswa.'”
Lolu chungechunge lususelwa kwifilimu yakudala ka-1982 kaGeorge A. Romero.
Ngaphezu kwesimemezelo sokukhiqiza, sithole izwi ezigabeni ezine ezizoboniswa kwisizini yesibili I-Creepshow.
Okuphambili kuqala yi- "Shapeshifters Anonymous" Ingxenye eyodwa no-XNUMX enenkanyezi u-Anna Camp (Blood weqinisono-Adam Pally (I-Mindy Project). Izingxenye zabhalwa ngabakwaNicotero, ngokususelwa endabeni kaJA Konrath (Call Last) ngomuntu oqalekisiwe efuna iqembu lokusekela i-werewolf.
Okulandelayo, uKeith David (The Thing, Ashley Laurence (I-Hellraiser), noJosh McDermitt (The Dead Ukuhamba) izovela engxenyeni ebhalwe nguFrank Dietz enesihloko esithi "I-Pesticide" mayelana nomqothuli owenza "ukuthengiselana okungapheli."
Futhi ekugcineni, i- "Model Kid" ibhalwe nguJohn Esposito futhi ikhathaza umfana ophendukela kuzinto zokwakha izilo ukuze abalekele impilo yakhe engajabulisi.
Isizini yokuqala yaphahlaza amarekhodi ebhodini le-Shudder, futhi nakanjani sizobe sesilungiselela isizini yesibili I-Creepshow uma ifika ngonyaka ozayo!
Ngabe ujabulile ngesizini yesibili? Sazise ukuthi ucabangani kumazwana!
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-4K UHD (7) I-Amazon (i-movie) (11) I-Amazon (uchungechunge) (12) I-AppleTV + (6) Imisebe ye-Blu (21) Amahlaya Ahlekisayo (50) Amahlaya (14) Izinto Ezipholile Zokuthenga (32) Izinto Ezintsha Zokukwenza (7) Izindaba Zokuzijabulisa (9) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (45) Kutholakale amavidyo (27) I-Gore (24) I-Halloween (1) Izinkukhu (6) I-HBO (ama-movie) (6) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (63) Izindaba zeHorror Entertainment (11,040) Ama-movie asabisayo (456) Uchungechunge lwe-Horror (137) Ama-Horror Subgenres (11) IHulu (uchungechunge) (6) Izingxoxo (i-movie) (43) Izingxoxo (uchungechunge) (5) I-LGBTQ Horror (42) Uhlu (ama-movie) (41) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (21) I-Monster Horror (10) Isiqeshana se-Movie (3) Ukubuyekezwa kwe-Movie (78) Ama-movie (17) Umculo (39) INetflix (i-movie) (33) INetflix (uchungechunge) (51) Okungeyona inganekwane (5) I-Paranormal (77) I-Psychological Horror (thrillers) (53) Uchungechunge (1) Ukubuyekezwa kochungechunge (10) Ukuqhaqhazela (i-movie) (56) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (19) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (40) Ama-Movie wokusakaza (121) Uchungechunge Lokusakaza (48) Amathoyizi (5) I-trailer (Imidlalo) (1) I-trailer (i-movie) (316) I-trailer (uchungechunge) (51) Imidlalo yama-trailer (1) Ubugebengu Bangempela (49) Uchungechunge lwe-TV (6) Imidlalo Yevidiyo (197) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (13)
I-trailer 'Yomkhosi' Isinikeza Okunye Ukungena Okungaphazamisi ...
ITrailer Yezilwane 'Ezingaziwa Ingenisa Umhlaba Okuyo ...